Xildhibaanka G/degaank a oo ah Isgaadhsiiye by UN-Habitat - issuu
Barnaamijka Degsiimada Aadamaha
4. Xildhibaanka G/degaanka oo ah Isgaadhsiiye
ee Qarammada Midoobay
Xildhibaanka G/degaanka oo ah
Tilmaame-bare 4 Tababarka Hoggaanka la Doortay
Xarunta QM ee Degsiimada Aaadanaha (UN-HABITAT)
Xildhibaanka G/Degaanku markuu yahay Xidhiidhiye ama Is-gaadhsiiye Tilmaame-baraha 4aad
Tababarka Hoggaanka la soo doorto X/dhibaanka G/ Degaanku markuu yahay Xidhiidhiyaha
Tarjumaddii: Jaamicadda Hargeysa
Taxanaha Agabka Tababarka Istanbuul, 1996kii “Shir-madaxeedkii Caasimadaha” i
Waxa sawira y Joel Elrod waxaana dejiyey Vicki Gillette
X/dhibaanka G/ Degaanku markuu yahay Xidhiidhiyaha
Taxanaha Agabka Tababarka
HORDHAC Sida ku cad natiijadii ka soo baxday baahiyaha tababarrada ee ay samaysay Xarunta Jimciyadda Qaruumaha ka Dhexeysa u qaabilsan Dejinta Dadka (Habitat), waxay u muuqataa in baahiyaha tababar ee saraakiisha dawladda maxalliga ah ee la doortay (xildhibaannada) ama siyaasiyiinta maxalliga ahi yihiin kuwa loogu baahi badan yahay, islamarkaana yihiin qaybaha loogu waxqabad yar yahay markaa laga eego dhinaca horumarinta awood-dhiska shaqaalaha iyo maamulka maxalliga ah. Dalal badan oo aad u kala duwan sida Nepal, Polan ama Uganda iy Paraguay ayaa, sannadihii u dambeeyey, bilaabay markii u horraysay ama kadib markii muddo tobanaan sanno laga joogo habraac ay ku dooranayaan xildhibaanno iyo guddoomiyayaal degaanno. Meelaha ay dimuqraadiyaddu ka hirgashay sida Ecuador, India iyo dalka Maraykanka (USA) ayey kala hormaynta baahiyada tababar ee saraakiisha dawladda maxalliga ah ee la doortay liistada kaga jirtaa halka u sarraysa.
X/dhibaanka Degaanku markuu yahay Xidhiidhiyaha
Si Hbitat wax uga qabato baahiyaas, waxay dejisay oo tijaabisay taxane tilmaamayaal-tababare si ay xildhibaannada uga kaalmeeyaan sidii ay wakiil uga noqon lahaayeen muwaadiniinta, hoggaamin rayid ahna ugu sameyn lahaayeen, islmarkaana si karti le hula shaqayn lahaayeen dawladda dhexe iyo maamulka, farsamada iyo aqoon-yahannada haya’adaha maxalliga ah. Waxay tilmaamayaashu ka hadlayaan siyaasadda, talo go’aaminta, cog-tebinta, heshiisiinta, hogaaminta, G/ maamulidda, iyo qabashad shirarka, u suurtagelinta iyo u fududaynta waxqabadka xildhibaannada, maamulka lacagta iyo waxyaalaha kale ee baahiyahaa la xidhiidha. Tilmaamhani, “The Councillor as Overseer:, wuxu ka mid yahay 12 ka taxane, waxana inta badan loogu talgalay tababaryaaasha ka shaqeeya haya’adaha qaran ee maxalliga ah ama unugyada ka sii farcama dawladda maxalliga ah. Si ay kaalmo dheeraad ah uga helaan tababarayaasha isticmaalya tilmaamaha ayey Habitat waxay soo saartay bug tilmaamaha weheliya oo la yidhaahdo “Trainer’s Guide for Training of Elected Officails”, kaas oo ay ku yaaliin qoraaallo tababare iyo xog si gaar ah loogu diyaariyey si ay tababrayaashu uga faaiidaystaan marka ay tababar-hawleed ku salaysan tilmaamayaasha u qorshaynayaan saraakiisha maxalliga ah ee la doortay. Waxa la filayaa in tilmaamahan tababare si weyn wax uga taro xoojinta awoodda waxqabad ee dawladda maxalliga ah iyada oo taas lagu suurtagelinayo gudbinteeda ku dhaqan hogaamin fiican, taas oo ka mid ahayd qodobadii ugu waaweynaa ujeeddooyinkii laga lahaa shirtka Habitat II, 1996. Waxan jeclahay in aan u mahad-celiyo Dr. Fred Fisher iyo Mr. David W. tees oo diyaariyey kan iyo tilmaamayaal kale oo taxanaha ku jira iyaga oo la kaashanaya shaqaalaha Xarunta Dejinta Dadka ee Jimciyadda Qaruumaha ka Dhexeysa (Habitat), Qaybta Tababarka oo ku taal Xarunta tababarka kaas oo ay taakulayso dawladda Netherlands. Waan kale ee jeclahay in aan si gaar ah u sheego (aqoonsado) tababaryaasha iyo saraakiisha dawladda maxalliga ee Costa Rica, El Salvador, Kenya, Lithuania, Ramania iyo Uganda, kuwaas oo gacan ka geystay tijaabadii agabka tababarka ee meelaha kale lagu sameeyey.
Dr. Wally N’Dow Assistanat Secretary-General United nations Centre for Human Settlement (Habitat)
AQOONSI Tarjumadda iyo habaynta af Soomaaliga ah ee Tilmaame-barayaasha Hoggaanka la soo doortay waxay ku hirgashay Barnaamajka Is-maamulka Fiican iyo Tababarka Hoggaanka la soo doortay ee ay maal-gelisay EU-du, isla markaana uu fuliyay Xafiis Goboleedka UN-HABITAT ee Afrika iyo Dalalka Carbeed. Tarjumadda iyo habaynta af Soomaaliga ah ee Tilmaame-barayaashan Tababarka Hoggaanka la soo doortay, waxa ka hawl-galay koox tarjumadda ku xeel dheer oo ka tirsan: Akaademiga Nabadda iyo Horumarka, Jaamicadda Hargeysa iyo Jaamicadda Cammuud; iyaga oo ay ka caawisay Hayâ&#x20AC;&#x2122;adda QM ee HABITAT, laanteeda Hargeysa ku taal. Mahad-naq gaar ah waxa mudan Akaademiga Nabadda iyo Horumarka oo ka hawl-gashay tifaf-tirka iyo isu-ekeysiinta Tilmaame-barayaashan. Waxa kale oo mahad-naq mudan Jacfar Maxamed Gaaddaweyne oo Akaademiga Nabadda iyo Horumarka ee Somaliland ka tirsan, Maxamed Muumin oo Jaamicadda Bariga Afrika ee Puntland ka tirsan iyo Maxamed Afrax oo Xarunta Cilmi-baadhista iyo Dood-wadaagga ee Koonfurta-Dhexe ee Soomaaliya ka tirsan, kuwaas oo wada diyaariyay tarjumadda ereyada Ingiriisiga ah ee Tilmaamebarayaashan ku jira. Mahad-naq gaar ah waxa isna mudan Maciej Sudra oo diyaariyay astaamaha iyo naqshadaha jaldiyada Tilmaame-barayaashan.
Koofiyad xardhan uu gashan yahay milix soo saare reer Bali ahi
HALKA UU KAGA JIRO TILMAAME-BARAHAN Bogga Sida loo isticmaalayo Tilmaame-barahan Qaybta I Qormada xildhibaanka oo tebiya ah Qeexid Soo koobid Dib-u-eegid Aragtida iyo Xaqiiqooyinka Fikrado iyo rumo Is-Gaadshiinta Caqabadaha is-gaadshiinta fal-galka ah Milicsi Jawi is-beddel keenaya Dhegeysi falgalsan Milicsi Qodobbo muhiim ah Raad-raac
3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 10 13 15 16
Qaybta II Tabarka hawleed ee xildhibaanka oo tebiya ah Kormeere X/dhibaanka G/ 4.1 Layli is kululayneed: Imisa laba jibaarane ayaad aragtaa? 4.2 Soo Bandhigidda Tababaraha Degaanku 4.3 Layli: Hoos u dhigidda caqabadaha war isgaadhsiinta markuu yahay 4.4 Qalabka: Isqiimayanta dhagaysataha Xidhiidhiyaha 4.5 Layli: La Hadalka Beesha 4.6 Layli: la tashiga doortayaasha 4.7 Layli: Xirfad Wareejin Taxanaha Agabka Tababarka
17 18 21 22 23 29 31 33 37
SIDA LOO ISTICMAALAYO BUUGGAN Buuggan (gacan –ku-haynta ah) ee loogu talo galay xildhibaanka oo tebiye (xidhiidhiye) ah, sida kuwa kale ee susuntan, waxaa loo siticmaali karaa siyaabo badan.
Wax-isbarid Qoraalkan kooban ee buuggani kufurmayo waxaa loogu tala galay wax-isbarid. Waxa keli ah ee aad u baahan tahay waa meel deggan oo aad ku fekertid iyo mararka qarkood, waxaad wax ku qorato. Si aad natiijooyin wanaagsan aad u gaadhid, waxaanu kugu dhiiri gelinaynaa inaad qortid jawaabha su’aalaha ka soo baxa qoraalda lagu jiro. Qiimaha barshada warku wuxuu akhristaha u laablaabmayaa dhowr jeer marka uu sidaas sameeyo.
Tababar Hawleed Qoraalada tababaraha iyo layliga aqabbka buugan ku qoran waxaa loogu talogalay tababarayaasha carbisan oo ku jira tabobar hawleed loogu talogalay xildhibaana ka lala socda Dawladdaha Hoose. Waxaanu ku darnay noocyo kala duwan oo hawlo barasho ah iyo qaabab tababarayaa loogu talo galay inay siiyaan furfurnaan xooggan (jajabnaan) si uu u wafajiyo tabobar hawleed ka tarjumaya baahiyaha gaarka ah ee xildhibaannada ka qayb gelya. Ujeedadayadu waxay ahayd inaanu soo saarno buuggan si aanu kuugu dhiiri gelino inaad ku dabbaqdo waayo aragnimada gaarka ah tababare ahaan sis are loogu qaado qiimaha barasho X/dhibaanka G/ ee agabkan tabobar uu u leeyahay xildhibaanadda ka qayb galaya. Ka tobabare ahaan, waxaad go’aansan kartaa inaa aqgabka buuggan ku yaal u isticmaashi sida uu u qoran yahay. Degaanku Haddaad doontid (jeclaysatid), si kastaba ha ahaatee, dibbaad u qori kartaa ama u beddeli markuu yahay kartaa waxa ku qoran markba baahidu siday tahay si loo waafiyo ujeedooyinka gaarka ah ee Xidhiidhiyaha tabarka xilligaas. Waxaad b dooran kartaa
inaad saddex saacadood oo tabobar ah bixisid adigoo isticmaalaya layli muftaax ah iyo hawlo ku jira buugga. Ama waxaad ka faa’iidaysan kartaa waxyaabaha badan ee ee buugga ku yaal ado ku kabaya waxyaabo kale oo jeebkaaga ah si aad u deeraysid program-ka maali dhan (buuxda)
Buugaanu waxa uu ka mid yahay susun 12 ah o loogu talo galay tabaaridda madaxda la doortay. Waxaad go’aansan kartaa ama lagaaba codsan karaa inaad bixisid tabobar hawleed kaa doonayso (rabto) inaad isticmaasho in badan ha lama dhamaan buugaggan oo dhan waqti dheer. Halka buugiiba loo isticmali karo keli ahaantii, isticmaalkooda sida ay u kala horrayaan waxay keeni kartaa quwad waayo aragnimo iyo waxbarsho midaysan oo ay helaan xildhibaanada ka qaybgalayaasha ihi.
Koox tababarid Agabkan waxaa kale oo loo isticmaali karaa, iyadoo laga faâ&#x20AC;&#x2122;iidaysanayo tabobare waayo arag ah / hage, si loo hagajiyo wax qabadka xildhibaanada ka wada shaqaynaya hal maamul oo isku mid ah. Marka la tababarayo xildhibaanada wada shaqeynaya, waxaanu aaminsa nahay in haguhu diyaar u yahay isku dubbaridkaa hawlaha tabobarka ee buuggan ku yaalla siyaaba kala duwan. Waxaa dhici karta mar aad adiga, hage ahaan, aad dooranaysid inaad hawlo cusub ku kordhisid iyado ku xidhnaan doonta wadciga iyo kooxda. Waxaanu rajaynaynaa in marxaladahan oo kale aad buuggan u aragtid ilaalad ay ku jiraan fikrado badan oo tababar oo loogu dari karo laguna qiyaasi karto, (barbar dhigi) karo la beddeli karo ama la iska deyn karo, sida ay kulmiyso marxaladu (wadciga) Waxaad haysata doorashooyin badan oo aad ka dooran karto beegaggan tabobarka. Waxaana kuu rajaynayaa inaad aad uga faaâ&#x20AC;&#x2122;iidaysatid.
Qormo X/dhibaanka G/ Degaanku markuu yahay Xidhiidhiyaha
Xildhibaanka G/Degaanku markuu yahayoo Xidhiidhiyaha
Qeexid Xildhibaanku, markuu tabiye yahay, waxuu bixiyaa helaana wax talooyin iyo ay ku dheehen tahay sugnaan iyo fahmid.
Soo koobid Qormaddan waxay furfur doontaa inyar (wax0 oo ka mid ah waxyaabo suurto ahka ah ee uu haysto xildhibaanku si uu wax u tabiyo. Kuu sheegimayso sida aad khudbad siyaasadeed oo wax kicisa aad u jeedin lahayd, ama qorto xusuuus reeb awoodweyn leh, ama inaad si qurux badan TV-ga uga muuqatid. Laakiinse, waxaanu kuu talo jirnaa inaanu awoodda saarno qaybta isgaadhsiinta ee aan dadka badankiisu si wanaagsan u samayn, taas oo ah, dhegeysi. Waxaanu kale oo ku talo jirnaa in talooyin la xidhiidha siinta iyo gelidda warcelin, inaanu u aragto fikradaha meel lagu gano mararka qaarkoodna caqabad is hortaagta gudbinta isgaadhsiin, iyadoo lagu talo jrio in laga helo mid ama laba raadraac oo ku saabsan fulinta sahamada beesha.
Dib-u-eegid Markaanu anigu isu arkayo tebiye, madaxayga waxa soo gelaya arrimahan soo socda: 1._________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ X/dhibaanka G/ Degaanku markuu yahay Xidhiidhiyaha
2._________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 3._________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
Aragtida iyo Xaqiiqooyinka Noqosho tabiye falgal leh wuxuu noqon karaa waxyaabo kale duwandadka qaarkii. Tusaale ahaan:Juanita waa hadlaa fiican. Aynu weydiisano inaay magacyadeena ka noqot kulanka furitaanka xarunta cusub ee degaanka.
Miyaad akhriday Murichos uu ku soo qoray jariidadda? Wuxuu u go’ayaa si cad. Waa inuu noqdaa xildhibaan falgal leh markuu bisha soo socota xafiiska la wareego. Ma heli karnaa sarah inay metesho magaalda shirka aynu ku lenahay budhla duullada? Waxaynu u baahanahay qof dhegeysan kara doodahooda iyo tabashooyinkooda iyada oo ay la socdaan sifahan iyo maskax furnaan. Maqaal uu Abdullahi ka qorey mashruuca guriyeynta cusub wuxuu ahaa ka ugu wanaagsan-nidaamsan, qodobka ku taagan, weliba aad u qancin badan. Alicia, anigu waxaan eeg-eegayaa qof sahan ku sameeya Hooyooyinka xaafadda halkaas oo magaaladu ka furi doonto xarun cusub oo maalintii lagu xanaaneeyo dumarka. Waan fahmayaa in kaliyahayga, Tung, uu yahay wareyste fiican ma idinka amaahan karnaa dhowr cisho? Ma ku aragtay xildhibaan Ramos TV-ga xalay? Waa nin aad u wanaagsan. X/dhibaanka G/ Sida ay tusaalooyinkani muujinayaan, habadka isgaadhssintu waxay koobtaa kala Degaanku doorashooyin badan, oo ah, in markeda muujinayaa baahiyaha kala duwan ujeedooyin iyo markuu yahay wararba. Dabadeedna ,xoogay bay nala adkatay inaanu go’aansano waxa aanu buuggan ku Xidhiidhiyaha darayno si aanu u tixgalino arrimahayaga isgaadhisiineed ee si gaara kuu teebanayo iyo baahiyahaaga. ileyska waxa la saari doonaa sigaadhsiinta hadalka, ama afka, isgaadhsiin –marka laga reebo isgaadhsiinta qoran. Go’aanka waxaa qabay dareenkayga inaad waqti iyo tamar badan ku lumisid hadalka iyo dhegeysadka halkii aad ka qori lahayd. Marka laga eego dhinaca Taxanaha akhriska-dhegeysiga isgaadhsiinta,waxaanu tuhunsan nahay in tabarbar kasta oo aad soo Agabka qaadatay ee ahaa tebinta afka inuu xooga saaray ddoorka hadlaha, halkuu culayska saari Tababarka lahaa dhegeysiga. Markaa laga eego aragtiyaha shakhsiga ee dunidaada kugu wareegsan, waxanu go’aansanay in aanu cleyska saarno xirfada dhegeysiga halkii aanu ka sari lahayn xirfadaha hadalka. Laakiinse ugu horreyn, eegno dhowr fikradood oo ku saabsan isgaadhsiint ataas oo wax weyn marka laga tago nooca isgaadhiinta ama shaqadiisa. 5
Fikrado iyo rumo Aragtida waa tebinyar oo kale, kelmadaha fahankoodu ugu adag in lagu qeexo kalmad, yar oo si gaar ah loo xushay. Ninba beni ku sheegay inay tahay “halka micno loogu samaynaayo waayo aragnimada”. Ama, markad loo dhigo si foolxun, aragtiyahaagu waa runtayaada. Sida aan u micneeyo waxaan arko waa waxa aan ku qeexo run. Waxaa laga yaabaa in aannay ahayn sida runtu kuugu muuqato, waxaana laga yaabaa inaan aragtiyahayagu midina aanay sax ka ahayn. Laakiinse waa halka aynu dhamaanteeba ka bilaabayno si aynu micne ugu sameyno dunideena. Maxusuusan kartaa sheekadii dadka indhaha la’ iyo maroodiga? Kolba halka ay maroodigu ka taabtaan ayay kolba sharraf duwankii hore yimaadaan. Midna wuxuu dareemaa adin ka kale waxayna la noqotay geed jiriddiis; mid kalaa wuxuu taabtay dabadii waxaannu ku sifeeyey xadhig; hadda mid kale taabtay dhinaciisa wuxuuna ku sitfeeyay inuu ahaa gidaar dhisme. Mid kasta oo iyaga ka mid ahi wuxuu aaminsanaa in isaga loo diray shay oo keliya. Haddana, waxa ay si kala duwan u sharraxayeen uu ahaa isla xayawaankii. Markaas waa dhammaan “runta” beesha oo aynu inagoo la shaqeynayna aynu is aragnaa. Markaynu bilowno sahaminta saamaynta fikradaha badan ee runta aynu ku dhaweynaynaa waxaynu u sii dhowaanaynaa”runta” haday runtu, jirto. Laba isir ayaa muhiim ah oo ku saabsan fikradahii :
a) halka ay ka soo jeedaan (i.e. maxaa saameeya fikradaheenna) iyo X/dhibaanka G/ Degaanku markuu yahay Xidhiidhiyaha
b) maxaynu sameennaa marka fikradeenu aanay la mid ahayn kuwa dadka kale arrimo badan ayaa aynu sameeyaan fikradaheenna iyo runta.Marka hore, waxaynu aragnaa alaabada inagu wareegsan si ka duwan. Waxa ina hortaalla fikrad baadhitaan hlakaas oo koox dad ahi lagu muujinayo laba jibaarane kaasoo loo sii qaybiyay laba jibbaarene. Marka koox dad ah la weydiiyo inka laba jibaare ay arkaan, jawaabaha ugu horeeyaa sida qaalibka ah waa 16 ilaa tiro dhowr iyo labaatan sare ah. Dancan, jawaab kastaa waa tiisaxa “ahayd” jawaabtaas oo ku xidhan qofka marba inta laba jibaaree u muuqda.
Ta labaad, waxaynu dareennaa caadiyan waxa dhaca oon u fahamno si ka duwan xaqiiqada inaynu saamayn ku yeelato bedesha aragtideena, ama fidkrad, xaqiiqada. Tusaale ahaan, laba qof oo ku waaya arkay isla qabow, baraf, dayr, laakiinse ku tilmay xiligaaas si aad uga duwan saaxiib lamaane ah oo sanadka ku soo dhamaystay meel kale oo dunida ka mid ah. Labadooda, midka neceb qanowga ayaa wuxuu dayrta ku shegaa mid “aad iyo aad u dhibaato badan”. Ka kale eek u raxaysta ku socodka barafka ayaa ku tilmaama xilliga “mid farxad badan”. Kooddeebaa saaxiibku rumaystaa?
Dhamaanteen waxa ina jira oo aynu leenahay “Dareemo gudaha ah” oo kala duwan oo ay soo saartay warbarashada inaga dhaxaysa ee aynu wadaagno. Dareemadaas gudaha ah waxaa sameeya hidaheena soo jireenka ah, waayo aragnimadii ciyaalnimada, wax barashadeennii asaasiga ahayd iyo radinta nolosheena. Waxaa kale oo saameeya waxyaabaha innagu ilhaamiye – runtii, wax kasta waynu samaynay. Markuu sii weynaado kala duwanaanta
dareenkayga gudaha iyo kaagu, waxaa sii adkaanaya is fahamkeenna “nadiifta ah”. Nadiifda ah waxaynu uga jeednaa marka aynaan gashan muraydaha madow oo u safeeya wayo aragnimadeena siyaabo badan.
Sida aynu dareeno kala duwanaanta fikradaha marxaladaha inoo muhiimka ahi waxay ku xidhan yihiin dhamaan ku xidhan yihiin isiraada (godobbada) aynu hadda ka soo shekaynay. Dereenka jawaabtu wuxuu ka bilaabmaa “ inaad noqotid isdifaa\_ce” (i.e. waxaan difaacayaa meesha iyo sidii ay muuqato waxaanan dedefeynayaa taada) ku “socod masaafo dheer dacaskaaga”. (i.e. tusaya xiiso weyn leh iyo ku adkayn qodobkaaga doodad is sharraxiisa, mid ama mid kala , doonis qaadasho haddii aan u arko in uu yahay mid la qaadan karo).
IS-GAADHSIINTA Isgaadhsiinta afka hadalka iyo dhaq-dhaqaajinta jidhka. Kartida qof ama shakhsi dareensiisa kalsooni u sheekeysi ama hadal jeedina ama hadlis, waxay ku xidhan yihiin dhaqanka, waxbarashada, xirfad la baran karo. Waa lagama maarmaan in xildhibaanka golaha deegaanku yahay hadal yaqaan iyo dhagayste wanaagsan. Afka hadalka waxa xarakaad ama muhiimad u yeela raacsanida dhaq-dhaqaaqa jidhka. Marmar dhaqaajinta jikdhku wuxuu xataaa bedeli karaa macnaha isgaadhsiinta afka hadalka. Dadbaa leh karti ay ku gudbiyaan shucuurtooda isgaadhsiinta dhaqdhaqaajinta jidhkooda, hal nooc oo xidhiidhka dhaqdhaqaajinta jirka ah ayaa loo yaqaan “wax af la mid ah laakiin rasmi ahayn”. Xidhiidhka afka hadalka waxaa ka mid ah danan, xawaaraha muusiga loo yeedhiyo, dhawaaqa dheer iyo gaangi. Tusaale ahaan, Somaalida kor u qaadida xawaajiidaha indhaha waa tilmaan ogolaansho, halka ay Maraykanka kor u qaadida xawaajiidaha indhuhu tilmaamaan diidmo. Lakiin Jaban X/dhibaanka G/ kor u qaadka xawaajiidaha waxaa loo arkaa inay tahay ceeb foolxun ama fuxshi. Waxa kale oo ay dad kuwada hadlaan dhaqdhaqaajinta jidhka hadba sida ay isugu dhow yihiin. Degaanku markuu yahay Qaabka jidhka iyo xidhiidhka indhuhu waxaa kale oo ay sheegaan fariimo. Tusaale ahaan Xidhiidhiyaha xidhiidh la’aanta indhuhu waxay sheegi karaan xishood ama danayn la’aan. Isgaaadhsiinta dhaqdhaqaaqa jidhku waa si haboon oo sheegta ama muujisa qiirada ama laab la kaca.
Marka isgaadhsiinta afka hadalka u raaco isgaadhsiinta dhaqdhaqaaqa jirku wuxuu dadka siiyaa adeegsi awood buuxda oo lagu diro ama lagu sii daayo wararka ama fariimaha.
Caqabadaha is-gaadhsiinta fal-galka ah x Waxaa jira suurogalinmada cago faro badan is hortaagaan isgaadhsiinta talogalka leh. Halkan dhowr ka mid ah ayaanu ku soo qaadnay. x Waxaa laga yaabaa in dadka aad la xidhiidhaysid leeyihiin ujeeddooyin, qiime, iyo aragti ka duwan kaaga. x Waxa laga yaabaa waayo aragnimadaadu inay aad uga duwan tahay tooda, aanay kugu adagtahay inaad dareento kala duwanaanshahaas marka aad la hadlaysid. x Waxaa laga yaabaa in dareenkaaga xildhibaanimo dadka baad in geliso dadka la hadlayso ama aad tagayso marka aad dareento inay awaad u ama aad u joogtaa dhibayso. x Xataa sida loo diyaariyo halka shirka lagu qabanayaa ayaa catabad ku noqon karta war kala gaadashada iyo is-fahamka (waxaanu ku fekerenynaa aqaladda xildhibaanka ku baahsan dunida hareeraheeda ee abuura caqabido la arki karo iyo kuwa xagaa mashaxda ahba xildhibaana iyo dadwynaha dhexdooda).
Milicsi Waqti yar qaado ama laba oo ka feker noocyada carqaladaha (caqabadaha) idiin dhexeeya xildhibaana kale ee laga yaabo inay saamayso awoodaada tibineed dhexdiina, ta adiga iyo xildhibaannada kale ee dawladda hoose dhexdooda; adiga iyo dadka ku doonta dhexdiina; ma jiraan waxyaao u baahan inaad sidaad meesha uga saarto caqabadahah ama aad u yaraysid saamaynta ay ku leeyihiin awoodaada tebineed ee kooxaha ama shakhsiyaadka? X/dhibaanka G/ Degaanku markuu yahay Xidhiidhiyaha
Taxanaha Agabka Tababarka __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 8
Jawi is-beddel keenaya x Siyaabo badan baa jira oo loo kordhin kartidaada si aad ku ogaatid dunida si ka duwan (iyadoo laga duulayo fikradaha kuwa kale kula qaybsadaan) iyo inad ula xidhiidho si siman kuwa kale. x Marka aad doonayso inaad fahamtid fikradda qof kale ka qabi arrin markaas tagan, waxaa wanaagsan qiimaytaada aad haysatid, amaba ka sii wanaagsane, waxaba ha qiimeyn. Markaa aynu bilawno inaynu qiimeyno aragtida qofka ee shay, aynu su’aale ka furno qiimeyntiisa, ama aad samaysid qiimayn dadnimadiisa, waxaynu albaabka u xidhaynaynaa isfahn la’aan. x qaado inaad xaliso dhibaato ama masii-helitaan hanuunin maraxladaha beesha halka aad u yeedhin lahayd xalka gacanta kuugu jira. Marka aynu nimadno misskeenna dooda iyadoo “maskaxdeenu buuxdo” raja weyn lagama qabo in xal la wada leeyahay la qaadhay. x kartiteeda fasaxnaanta ah, ka madax banaan khiyaamo kuna qafilnayn hadii moogin khaas ah dano gaar ah waa aahad qiimo leh e tebinta laguna dhaaafayo (laga gudbay) xuduuda badan oo beelaheena qaybiya. x la gabid. Dhamaydan waxaynu eegi doonnaa waqti dambe waayo waa “qabab” dhegeysi oo qimo leh . hadda, aynu nidhaahno la qabidi waa karitida qofku isku tilmaami karo hdibaatada qof kale haysta, la qaysasho dareemadiisa iyo oggolaansho shucuurta iyo jwaabaha qiimo wayn leh. Waa raad furaya albaabo badan oo war isgaadhsiin falgal leh. x gudbinta calaamd muujinaysa simnaan waxa ay kordhinaysaa tebintaada guusha ku dhisan (tusaale ahaan, gudbinta dhaqan ixtiraam, is-aamin,, is-qiimeyn la’aan derejadada iyo mansabkaaga).
x Waxa aanu ku talinaynaa waa doonista furfurnaanta iyo soo dhowaynta waayo aragnimadeena iyo aragnimada dadka kale. Maddaama aynu dhammaanteen ku noolnahay caalam run ah oo aynu xaqiidada qaloocino, kala dhiman, cadaaladarro, iyo keli, waxa aynu rajayn karnaa oo keliya in karankeen iyo damiirkeennu inoo dhaqaajin doonaan dhinaca kuwa kale ee aanu isku dhibaatada nahay. Ha hadlin ilaa aad aamusnaanta ku wanaajinaysid Lama-yaqaan
Dhegeysi falgalsan Dhegeysiga waa xirfad. Dhegeysi falgasani waa xirfad shaqeysiiyey. Marka aynu lahayn tebiyuhuu waa qof hawl labnalaan ka dhibaato badan dhegeysiga halka ay ka ahaan lahayd akhriskeedu, waayo waxay u baahan tahay tamar laba lab ah dhegeysadkeedu. Waa wax fudud inaad maskaxdaada ay ka fekerto waxyaabo kale marka aad qof kale dhegeysanaysid, waa wax adag “mali-iyoodku”marka aad hadlaysid. Dhegeysiga falgashaani wuxuu inooga baahan yahay inaynu dhegeysanno si aynu u kala ogaanno waxa la yidhi waxa aan la odhan. Waxaa iyana laynooga baahan yahay inaynu la socono dhaqdhaqaaqa labada indhood isla markiina aan kala socono labada dhegoodba. Labadan baahiyoodba way inaga fogeyn karaan wax algu hadlayo. Wareer, miyaanay ahayn? Dhegysiga falgadhani waxa waye su’aalo weydiin sdia: ma fahmaya wax qofka kale sheegayo? Qofka kale ma I fahmayaa? Mid ka mid ah qoralyahannadan ayaa dhowaan kala kulmay waayo-arragnimo markay diyaarinayeen tababar hawleed dalalka bariga yurub. Wuxuu weydiistey saaxiibkii inaanu u sii iibiyo dhowr boqol oo todoba-min sagaal ah turub ah oo uu tababarka hawleed u isticmaalo. Markii tiro furay halkii xidhmo turubka, waxaa ku jirey googo’yo badan oo waraaqo ah. Al malee adigu arrintan. Isagu wuxuu ku hadlyey “hishash” iyana waxay malaysay centimeter.
Waa maxay waxa uu ku dhaadanago hadluhu? Waa maxay dareemada la socda warku? Waa maxay siigadda odhaahaha loo yidhi? Raadinnta jawaabaha su’aalahan iyo kuwa kale ayaa gacan inaga siinaya si aynu dhegeystayaal fiicfiican u noqono. X/dhibaanka G/ Degaanku markuu yahay Xidhiidhiyaha
Dhegtu waxay kumbtay Gudcur -maahmaah Maasai
Dhegeysigu waa hawl aad u adag, haddaad ka shaqeysid. Baadhitaan baa lagu ogaaday in dhegeysiga ay la socoto wadno garaac deg-deg ah, xawaare deg-deg ah ee dhiigga, iyo kulaylka jidhka oo inyar sare u kaca. Mase jiraan wax cadaynaya, si kasta oo ay tahay, in dhegeysiga lagu bdeli karo guclayntaada maalin aad maalin walba aad ku sameeyo deriskaaga. Dhegeysigu waa hawl adag waayo waa habaraac laba-geesoofle ah isgaadhsiintu. Sida aynu horeba u soo sheegnay, waa inaynu si xoog ah oo noof nool isugu taxlujinnaa dooda socota. Kumo inaynu dhegeysanno oo keliya. Waa inaynu ku dedaalno inaynu hubino waxan kuwa kale leeyihiin si aynu u hibino inaan hadaf dalab leh iyo wixii isfahmka xumaynaya aynu yareyno. Hadlka waxaa ku qoran xirfado aynu u isticmaali-karno inanu u dhegeysano sida ugu iftiminta badan leh.
Qorshaha dhegesiga xoggan Haddii aad doonaysid:
Gudbi danayn………………………………..”waan maqlayaa wax aaad leedahay” Dhiiri gelin…………………………………..” haa; soco, U caddayn…………………………………”markaa, xaaladda sida aad u aragta….” Ku celi sida aad u fahamtay………………”Hdaan fahmsanahay, waxaad leedahay….” Daradka ka saar dooda ……Balaan eego inaan fahamsanahay muftaaya qodobkeedu…” Ka jawaab dareemada…………………..” Waxaad u egtahay inaad ka so dhooftay…..” Soo koob……………………………….”Balan eegno inaan soo koobi karo waxaad tidhi”
Dhamaan xirfadahan dhegesyigu waxay dadka kala u mujinayaan inaad tahay: x runtii, dhegeysaneysid; x inaad xiisaynaysid waxaanu ku hadlayo/hadlayso?; x Ixtiraam badan qofka oo yahay/ay tahay. Wixii ka soo baxa dooda lala yeesho qof beesha ka mid ah aad bay muhiim yihiin haddii kuwa ad la hadlaysaa dareensan yihiin inay xilgudasho la’aan ka jirto adiga iyo iyaga dhexdiina. Qoraalka Dadweynahah Dhegeyso (ku saabsan shaqada iyo la noolaansho xaafad faqiir ah oo marykanka laatiinka ah), uu qoray, Lawrence Salman, wuxuu leeyahay:
Suurgalnimada isgaadhsiin xumada shaqaalaha fulinta mashruuca iyo (dadka) aad buu u weynyahay __________cadigyan, dadka beesha ugu fiqiirsan ee degaan waxay noqdaan kuwa ugu dame ee codkooda la maqlo________ baqdin ama kalsooni xumo, ama sababta oo ah waqti badan ooh ore rayigooda la dhegeysan codkooda ay soo bandhigeena. Waana qalad in loo qaaato, si kastaba ha ahatee maadaama dadka fiqiirinta ahi ay ka hadal yar yihiin aad bay u farxad gelinaysa ___________ si isgaadhsiin wanaagsani u suurtoodo, waa inuu jira qof wax dhegeysta.
Dadka heeer degaan loo doortay waxa haystaan qaali ah oo masuuliyadeed oo ah inoo joogto ula xidhiidho beesha. Doodad salman waxay xoogga saaryasaa waxa ay gaar ahaan muhiimka u tahay marka laga (lala) shaqaynayo xaafado dhaqaalahoodu aad u liito. Waxa aynu qiimaynaynaa waxay ahaayeen qaar ka mid ah farsamooyinka loo dhaho (hdal)/ isgaadhsiin falgal ah oo aad la yeelato dadka ku taagera ado isticmaalaya hadal. Maqalka caadiyan waa isgaadhsiinta ugu xirfaddo gugu dambaysa e loo qaadan-karo tabobaridda saraakiisha Dawladda u shaqeysa. Sdiaa oo ay thay, hadana waxaanu aaminsanahay inay tahay ta ugu muhiimsan. Tannuna waa arrinta ee nagu dhalisay inaan hoosta ka xarriiqno dhegeysiga qormadan iyad ah.
Waxaan dooray inaan lugayo 20 miles si aan u dhegeysto cadageyga iigu xun haddii aan wax ka baranayo. - Leibnitz
Milicsi Waxaanu kaa doonaynaa inaad waqtiyar siisid dib-u-eegista xirfadaha dhegeysiga iyo waaya aragnimadda aad ka heshid. Sidee adigu isu qiimeyn lahayd dhageysta ahaan? Sidaad u malaynaysaa in saa\_xiibada, ama dadka kale ee beesha ka tirsani, adiga kuu qiimaynayaan dhegeyste ahaan? Goormay ahayd markii ugu dambeeyey ee aad beesha soo dhigtay sidaad u dhegeysato waxa waxay ka sheeqayaan doortayaashaadu sida Dawladaad u shaqeynayso? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
Sahammo: hab kale oo loola xidhiidho mujtamaca
X/dhibaanka G/ Badanaa Dawladaha hoose ma isticmaalaan sahamada muwaadinada si ay u dhegeystaan Degaanku beehsa. Hadana sahamado waxaa laga helaa warbixin qiimo leh oo u qondadey ah kuna markuu yahay saabsan: Xidhiidhiyaha a) adeegida qiimaha leh ee magaalada la helayo; b) sababaha ay muqaadiniintu aanay u jeclayn qaar ka mid ah adeegya ama sababta ay isticmaali laâ&#x20AC;&#x2122;yihiin qayb ka mid ah barnaamijyada ama adeegyo; Taxanaha Agabka Tababarka
c) waxaa laga yaabaa in loo baahdo wax xaqiiqa ah oolagu saleeyo hindisaadda mashaariic cusub ama bedelaad lagu sameeyo kuwa socda;
d) siyaabaha gacanta lagaga siinayo muwaadiniinta sinay noqdaan kuwo aad ula socda barnaamijyadda iyo addeegyada, iyo e) Qiimaynta adeegyada cusub ee loo baahan yahay.
Dawladaha Hoose ma isticmaalaan badanaa sahaminta muwaadinka sabata oo iyagaa u mquda inay adag yihiin qaalin ayihiin. Labada dareenba way jiraan mana jiraan. Sahamadu waxay noqon karaan kuwo aad u adag, gaar ahaan haddii ay ku dhegsan yihiin kuwaasoo ku dhisan xeer aqooneed oo xaqiiqa ah lagama hubin karo. Laakiinse waxaanu ku xasuusinaynaa ina magaaladaadu, si ay u fuliso sahan; aanay isku dayaynin inay raalligeliso qalin jebin Doctoral ah guddideena ama ay mujiso heer sare oo cilmi baadhis iyo kartiba ah. Tan
micnahedu maaha inaad kala daadsanaatid marka aad samaynaysid sahaminta muwaadinka. Dhinac kale haddii laga eego, waxaad naftaada ku qanci kartaa inwixii macluumaad intaa ka badan ama war ah, si deggan loo ururiyey, inuu ka wanaagsanaan karo warcelin la’aan xaga beesha kana wanaagsan ayhay iska sheekaysi qubane ah oo aad la yeelatid saaxibadaada kuugu dhow-dhow. Ka warran qiimaha uu ku kacayo? Haa, sahanka muwaadiniintu wuxuu noqon karaa mid qaali ah hadaad isticmaashid haysaha bathitaanka ee tababaran ama lacag badani kaaga baxdo qorshaynta iyo diyaarinta qoalabka isgaadhsiinta. Waxaa jira siyaabo kale oo lagu “Diyaarin karo qalabka” oo lagu sahamin karo muwaadinka. Hadii jaamacad ama manhajyo kale oo waxbarsho sare ay ku yaalliin meeshada, waxay noqon karaan meel “I” aad wanaagsan oo khibra iyo shaqo. Caadiyan, macallimiinta dhigaysa sida Cilmi baadhsita loo sameeyo way soo dhoweeyaan marka ay ardadooda u hlaan waqti ku habboon inay la shaqyaan macmiil run ah. Hadii aan khayraadkaas oo kale jirin, waxaad ka fekeri kartaa mid ama laba shaqaalahaaga ka mid ah u cilsaartid inay mararka qaarkood fuliyaan sahamada muqaadinka ee markii loo baahdo. Macdaamaa ay jiraan noocyo kala duwan oo sahamin waxaad samayn kartaa (telifoon, boo-ugu-ridid, suaal-weydiin, dood la yeealasho) dood-la-yelasho ayaa dareenka ugu weyn samaynaya, khaas ahaan marka muraadinka la gaadhayo degaanada ugu dhaqaalaha liita. (waana qaybahaas bulshada kuwa dhibatada weyni ka haysato inay maqlaank uwa jooga qolka shirarka ee magaalada.”)
Ma gelayno farsamad asida loo sameeyo sahanka muwaadinka ee qormadan. Ujeedadeenno waxay ahayd inaynu soo jeedinno in sahamintu thay qalab kale oo aad u X/dhibaanka G/ isticmaali kartid “war isgaadhsiinta” aad ka ledahay doortayaashaada. Haddaad go’aansato Degaanku inaad isticmaasho sahanka muwaadinka, halkan waxaanu kuugu haynaa dhowr qodob oo markuu yahay dheeraad ah oo aad ku qabsatid maskaxda. Xidhiidhiyaha 1. Hubi inaad diyaar u thay inaad mqashid waxa dadka kuu jawaabayaa leeyihiin.Mararka qarkood wararka lagu siinayaa ku raalli gelin maayaan, ama waxaa laga yaabaa in aad maqashid war aadan hore u maqlin. 2. Su’aalo is weydiintu waxay caadiyan muujinaysaa in wax dhicidoonaan go’aan ahaan. Xidhiidhka muwaadiniinta lala yeehsaa wixii kicin karaa filitaanaka arrintani Taxanaha waxay u baahan tahay in qorsha lagu muujiyo iyo wadista sahan kasta. Agabka 3. Kuwa ka qayb gelaya sahaminta muwaadinka aya augu dhow inay isticmaalaan Tababarka go’aamada. Arrintana waxay tixgelinaysaa kuwa laba dhinacba ku jira tallaabooyinka sahanka. Haddaadka sahamineysid hooyooyinka hawlaha qorshaynta-xaaska iyo sida kordhiye wax tarka barnaamijyada waxbarashada-beesha, dadka ka masuulka ah barnaamijyadanu waa inay ku jiraan naqshadeynta iyo wadidda sahamka. Waa inay kordhisaa fahamkooda iyo ka go’naantooda wixii ka soo baxa dabagalka. Isla 14 arrintaasu waa run guudahaan marka laga hadlayo kuwa ku mashquulsan bixinta war cusub. 4. su’aasha ugu muhiimsan ee laga jawaabaa marka sahanka muwaadinka la sameyo ka hor: a) maxaad donaysaa inaad ku ogatid sahanaka beesha?
b) iyo miyay golaha degaanka iyo shaqaaluhu diyaar u yihiin wixii ka soo baxa sahaminta muwaadinka inay u isticmaalaan hagaajinta tayada mashaariicda iyo khidmadaha beesha loo qabanayo?
Qodobbo muhiim ah x
x x x X/dhibaanka G/ Degaanku markuu yahay Xidhiidhiyaha
Waxaa jira siyaabn oo xildhibaan ahaan warka loo tebiyo. Ta ugu muhiimsani waxaa laga yaabaa inay tahay kartidaada aad si qushuuc iyo fahmid leh ee aad ku dhegeysan lahayd. Gorshaha waa tallaabooyinka aynu micnaha ugu samaynayno waayaaragnimadeenaa. Gagashooyinkasi waxay ka noqonayaan qayb weyn sida aynu u fasirano runta. Marar badan qorshooyinkanu milmaan dedaaeena inaynu u tebinno si aad u falgasaln. War isgaadhssintu, markaas, wuxuu u falgalsan yahay oo keliya kolba sida kartidaadu tahay ee aynu ku dhexdhexaadin karno garashadeena dunida inagu wareegsan iyo kuwa inala qaybsada isla degaanka. Dhegeysiga falgalsani xildhibaanka saaxiibkiisa ugu wanaagsan marka aad doonaysid inaad xidhiid wanaagsan bulshada (beesha) aad la yeelatid. Inkasta oo aad moodid inaanay israaci karayn, dhegeysiga falgalsani wuxuu keenaa war-isgaadhsiin sax ah oo laba dhina u socda. Waxa jira siyaabo badan oo aad gacan ku siinaysid qofka aad dhegeysanaysid siduu si falgalsan kuula xidhiidhi lahaa. Sahannada muwaadinku wa si kale oo wanaagsan oo loola xidhiidho doortayaashaada.
Raad-raac 1. Salmen, Lawrene F., Listen to the People (Washington, D.C., The World Bank, 1987), P. 49.
Aqoon is-weydaarsi Xildhibaanka G/Degaanku markuu yahay Xidhiidhiyaha Xildhibaanka Oo Tabiye ah Tababarka Madaxda la Doortay
KORMEERE Ujeeddo Isgaadhsiintu waa jidka ay soo maraan fikraduhu, warka, iyo araadu ee xidhiidhiya, halka uu ka soo bilaabmo iyo halka uu u socdo. Waxaa laga yaabaa in jidka la maryaaa ilaa dhadhaabo leeyahay, qalqaloocyo iyo wareegyo qaldan, ama mid toos ah oo aan wax dhibato ah lahayn. Xildhibaanka oo ah ninka hogaaminayaa waa isgaadhsiinaha --- oo ah ka aad u dhegeysanaya, araa’da si madax bannaaniya ula qaybsada, si joogto ahna u weydiiya warcelin doortayaashiisa, xildhibaannka kale iyo shaqaalaha—waxaa xaqiiqa ah inuu aad uga helaayo socdaal lagu guulaystay isaga oo madax la doortay ah. Aqoon-iswaydarsigani waxa loogu talogalay inu muujiyo. Khatana ka iman kara isgaadhsiinta liidata sharraxdo hababka faa’iidada leh ee lagu bixin karo ama lagu heli karo warka. Ka qaybgalayaashu waxay ka faa’iidi karaan waayoaragnimada isticmaalka xirfadaha isgaadhsiinta falaalka leh eek u bixinta iyo ku helidda warka saxa ah, muujinya xiisaynta ara’ada kuwa kale, iyo hoos u dhigidda caqabadaha isgaaadhsiinta ee abuuri kara is faham la’aano qaali ah.
Tusmo Sharaxaad gaaban ooh awl kasta oo barasho ayaa hoos ku muujisan iyadoo lagu soo koobay waqtiga loo baahanyahay. Haddii aad doonaysid bedeshif kala horayntooda, ama aad doonaysid inaad badh ka tagto, ama aad ku kordhisid alaab tababar aad adigu leedhay, dareensanow inaad xor u tahay. 4.1:
Layli sikululayn: Imisa laba jibaarane ayaad aragtaa? Ka qaybgalayaash waxay arkaan tirade inta laba jibaarrane ee ku jirta taswiir jeometric macluumaadka uu la wada leeyahay kala duwanaanshaha garashada waa laga doodayaa.
Soo bandhigidda tababaraha Soo bandhigid gaaban oo ku dhisan warka qormada iyo waayo-aragnimada tababaraha iyo is gaadhsiinta dadka dhexdiisa.
Muhiimada ictiraafka kala duwanaanta garashada, aad u dhegysiga dadka kale, iyo siyaabo kale oo lagu xibiyo laguna garto warka beesha.( 30 daqiiqo) 18
Xildhibaanka G/Degaanku markuu yahay Isgaadhsiiye
Tababarka Hoggaanka La soo doorto.
Layli: Hoos u dhigidda caqabdaha isgaadhsiinta(tebinta) Ka qaybgalayaashu waxay ka shaqeeyaan iyagoo isu qaybiyey dhowr kooxoo d inat soo saaraan caqabadha isgaadhsiineed ee hor yaalka kooxa beesha, shaqaalaha, iyo xildhibaanada iyo sidii loo ictiraafi lahaa loogana saari lahaa wixii caqabado jira. 160-90 daqiiqadood)
Qalabka qiyaasta: Qiimaynta dhegeystaha Ka qaybgalayaashu waxay dhameeyeen dhegaysi su’aalo falgal ah soo sawireena wixii kasoo baxay. (30 daqiiqo)
Layli: la xidhidhida beesha Ka qaybgalayaashu waxay abuurayaan aaraa ay ku bixiyaan ama ku helaan war ay ka helayaan kooxo beesha ka tirsan, ka warbxinta iyo ka doodista siyaabaha kala duwan. (60-75 daqiiqo)
La tashiga doortayaasha Ka qaybgalayaashu waxay u shaqeeyaan kooxo yaryar iyaga oo adeegsanaya habraac ay ugu helaan beesha war ku saabsan mashruuc guryo dhisida iyo in beesha looga helo waxtar lagu hawl geliyo arrintaas. (120-150 daqiiqo)
Layli xirfad qodobimeed Ka qaybgalayaashu waxay dib u eeg is ku samaynayaan waxay ka barteen waxaanay og’aamo shakhsi ah oo ay isticmaalaan aqoon-isweydaarsiga debadii. (30-45 daqiiqo)
4.1: Layli is kululayneed: IMISA LABA JIBAARANE AYAAD ARAGTAA? Waqtiga ay u baahan tahay: 20-3- daqiiqo
Ujeeddo: Layligani wxuxuu tusayaa kala dowanaanta kooxi ay utarjumi karto isla waayo aragnimada isku midka ah. Isla layligan waxaa loo isticmaali karaa muujinta barashada iyo koritaanka ay dhicikaraan marka dadka, kuwa arrimaha u arkaya si kale suwan qaybsan karaan kana da doodi karaan aratyahooda kala duwan si maskax furnaani ku jirto.
Habraac: Ku sawir in yar oo war ah shaxanka hoos ku muujisan. Shaxanka weynee si qof kastaa oo aqoon isweydaarsiga si qeeran ugu arki lahaa. Iyadoo ka soo qayb galayaashu eegayaa shaxanka warka goran, weydii (imisa labo jibaarane ayaad aragtan?)
Ka qabygalayaasha sii 30 ilbidhiqsi oo ay kaga jawaabaan su’aashan, weydiiso inay jawaabtoodu ku qoreen warqad. Marka qof waliba dhammeeyo qoritaanka jawaabta, ururi waraaqaha markiibana lamberi oo ku qor xaashida war-daabicidda. Tuse kala cadaynaya isugeynta kala duwanaanshaha laba jibaaranayaal ayaa laga heli karaa hagaha tababaraha ee madaxda la doorto. Marka qaar ka mida iskudarka suurtogalka ah la sheego, weydii ka qaybgalayaasha jawaabta saxa ah. Qaar baa odhan doona 30-maadaama kani yahay tirada ugu badan e farta lagu fiiqay. Waxa laga yaabaa in qof yidhaahdo jawaabaha oo dhami waa sax sababta oo ah su’aashu waxay ahayd, inteed aragtaa? Taasu waa jawaabta aad deydeyaysid maadaama ay tahay qodobka wax kasta oo midkeen uu saxo ay inoo wada sax tahay, siday wakhtigaa inoogu muqatao. Waxaad ka qaybgalayaasha waydiisaa sida ay u dareensan yihiin marka mid ka mid ahi uu ku doodayo inuu arkay ka badan hal labo jibaarane sida ay arkeen , (tusaale, ka shakisan ku haboonayn, ka shaqaysiiyey). Weydii waxay sameeyeen makra mid kale uu helay labojibbaranayaal ka badan inta lay heleen (tusaale, markale eeg si aad u aragtid waxay ka tageen). Ugu danbayn, weydii ka qayb galayaasha sida ay u arkaan in tarrinta layligani uu qadhsiinayo xildhibaanada marka ay la shaqeeyaan dadka kale ee la hubo inay keenayaan garashooyin kala dowan wado shaqayntooda.
4.2: SOO BANDHIGIDDA TABABARAHA Waqtiga ay qaadanayso: 30 daqiiqo
Ujeeddo: Soo bandhigiddani waa inay ka-qaybgalayaasha ka siisa fikrado iyo aragtiyo kaalinta tabiyinimo, iyo gaadaan-fikradeed oo loo adeegsan karo keli-keli iyo kooxba, layliyda ku jira aqoon-isweydaarsigan.
Habraac: Diyaari soo badhigidda ku slaysan warkii qoarmadii aynu soo dhaafany dorka tebiyaha. Ka fikir muhimadda ictiraafidda garashada kala duwanaanta , caqabadaha isgaashsiinta dhegeysiga falgalsan ee kuwa kale, iyo orashayaal kala duwanoo biinta iyo helidda waraka beesha. War kooban oo ku qoran kaadhadhka qodobbada warka yaa laga yaabaa inay go’aan kaa siiyaan sidaad warka oo nidaamsan ku heli lahayd adigoo aan ka bixin qorshahaagii. Waydii su’aalo marmar markaad soo bandhigida aad samaynaysid sidaa u ogaato fahanka ka qaygalayaasha oo aad waligaa u haysatid la socodkooda ku kordhi soo bandhigidaada waxoogaa maqal iyo muuqaal ah oo lagu kordhiyey wardaabacan iyo war qoraala oo ku qoran gidaarkana lagu shido si fahan dheeraad ah lagu helo.
4.3:Layli: HOOS U DHIGIDDA CAQABADAHA WAR ISGAADHSIINTA Waqtiga loo baahan yahay: 60-90 daqiiqo
Ujeeddo: Layligani wuxuu farta ku fiiqayaa caqabadaha isgaashsiinta xildhibaanda dhexdooda, xildhibaanka iyo shaqalaha dhedooda iyo kooxahaha beesha, iyo sidii loo hagaajin lahaa isgaadhsiinta iyadoo meesha laga saarayo lana yarynayo caqabdahan.
Habraac Layligan ka bilow adigoo u sharaxaya ka qaybgalayaasha in kala duwanaanta dadka waxa ay aaminsan yihiin (qiimahooda), waxay doonayaan ( hadafkooda) , sida u doonaeen inay arimaha u fuliyaan( habkooda ay ugu jecel yihiin), ama ay ka maqleen qodob ama arrin saamayn doona waxa ay yidhaahdaan, iyo sida ay u doortaan inay u fasiraan waxa ay maqlaan. Farta ku fiiq inkale duwaantasi gaar ahaan mrka ayka qarsoon yihiin kooxaha doonaya inay wada hadlaan, waxay noqonkaraan carqalado baqdin leh ee ishortaagaya fahanka. U sheeg ka qaybgalayaasha inay u shaqayn doonaan kooxo yaryar is ay u tilmamaan caqabdaha isgaadhsiinta ee lala yeelanayo kooxaha beesha , shaqaalha , iyo xildhibaanda dhecdooda iyo sida loo ogaanayo loogana saarayo meesha caqabadahaas. U qaybi ka qayb-galayaashaa ugu yaraan saddex kooxood mid kastana hawsha ka doodista caqabdaha hadalka mid ka mid ah saddexda xidhiidh ee soosocda: A) la hadalka xubno iyo kooxo beesha k tirsan; B) la hadalka xubno shaqalaha dawladda hoose ka tirsan iyo C) la xidhiidhidda qaar ka tirsan xldhibaanda. Koox yar oo kasta weydiiso inay qoraan oo taxaan caqabdaha is hoar taagaya ama qaloocinaya xidhidhka kana hawaab
Suâ&#x20AC;&#x2122;aalahan soo socda ee ku saabsan caqabad kasta:
1. Maxaa caqabada keenay? 2. Sidee xildhibaanku ku garan karaa marka ay jirto caqabadi?
3. Maxaa la sameyn karaa si loo dhaqaajiyo carqalada ama loo yareeyo dhibaatadeeda?
Soo jeedi in koox yar oo kastaa ku diiwaan geliso fikradaheeda qoaal jariidadeed iyadoo la isticmaalayo qorshe sida ka hoos ku muujisan oo kale bogga kan ku xiga. Marka ay ka soo wareegto 30 ilaa 45 daqiiqadood, isugu yeedh kooxahaas yaryar oo weydii mid kastaa inuu soo qoro war bixin. Marka ay dhammaantood soo war bixiyaan qabo shir weyn oo lagu qaadaa dhigayo isu ekaanshaha iyo kala duwaanaaanta firkradaha ay soo saareen kooxaha kale duwani.
WARAAQO HAWLEED LAGU BAABIINAYO CARQALDAHA WADAVHADALKA Xidhiidhida   
Xildhibaan iyo beel Xildhibaan iyo dhaqaale Xildhiaanada dhexdooda
Waxyaanaha muujinaya caqabdaha iyo wada hadalka 1. _____________________________________________
5. _____________________________________________ Xildhibaanka G/Degaanku markuu yahay Isgaadhsiiye
Kuwana waa qayb ka mid ah siayaabaha lagu garan kaor carqaladaha: 1. _____________________________________________
3. _____________________________________________ 25 4. _____________________________________________
Barnaamijyada lagu baabiinayo/fududaynayo caqabadaha wada hadalka 1. _________________________________________________________
Aragtiyo kale ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
4.4.Qalabka: ISQIIMAYANTA DHAGAYSATAHA Waqtiga loo baahanyahay 30 daqiiqadood
Ujeeddo: Qodabkani wuxuu ka qaybgalayaasha siinayaa bilow la isku hallaykaro oo war ah ee awooda midka ah halka ay ka liitaan dhagaystayaal ahaan. Habraac Weydiiso in ka qaybgalayaashu ay dhammeeyaan 12 suâ&#x20AC;&#x2122;aalood qalabka cabirka ah oo xirfadda dhegeysiga ah (eeg labda bog ee soosocda). Marka aya ka qaybgalayaashu dhammeeyaan qalabka cabirka, usoo eedi inay dareemaan tirada calaamadaha laga kontoroolo xabdaha kow iyo labo ( cadaynta hawl dhagaysi oo itaal daran) iyo tirooyinka xabadaha afar iyo shan ( cadaynta hawl dhegaysi oo aad u xoog badan). Dabadeed weydii ka qaybgalayaasha inay ka saaraan mid ama labo kuwa ugu hooseeya oo ka fikir siday u wanaajin lahaayeen dabcigooda dhegaysiga armahaas. Weydii ka qaybgalayaasha inay laba-labo uga doodaan fikiradooda si ay u wanajiyaan shaqadooda ka dhegaystayaal ahaan. Hal xaashi hawleed ayaa lagu bixiyey bogga soo soscda ee ku xiga ka qiyaasta sida ay ka qaybgalayaashu ugu isticmaali lahaayeen samaynta qodobbo la xidhiidha shaqda dhegysiga iyo qorshaha wanaajinta.
Qalabka isqiimaynta dhagaystaha Waxaa hoosta ku taxan 12 odhaahood oo ku saabsan kartidaada dhegaysi ee dadka kale. Qiimay kartidaad mid kasta oo bedadka ka mid ah ku sumad “x” sanduuqa ku haboon. Naftaada ha khiyaamayn oo daacad u ahow markaad ka jawaabaysid su’aalahan. Dhamay qabaka adigoo isu geynaya tirada sanaadiiqda la eegay xatabadaha ky uaal gunta bogga labaad. Odhaah
1 2 3 4 5 Waligeed marmar marar badanaa markasta maya
1. waxaan dhegeystaa dareemada aragtiyo, garashooyinka, qiimaynta iyo weliba rumaha. 2. Runtii waxaan aad ugu Fiirsadaa cidda hadlaysa sida kasoo horjeeda iska yeelyeel ah fiirsahsho 3. Uma ogalaado Dareemadayda ku saabsan dadka ay khusayso inay raad ku yeelato sida aan u dhegaystaa
4. Waxaan iska ilaaliyaa inay I jah-wareeriso ilqabadka hawlahu, Caadooyinkiisa, labaiskiisa, codkiisa iwm 5. Waxaan hubinayaa inaan sharafta uu qof leeyahay anay wax saamayn ah ku yeelan sida wanaagsanee aan u dhegaysanayo 6. Waxaan iska ilaaliyaa inaan ogalaado in waxa aan jecelahay ihaan maqlaa inay samayn ku yeelato ama keliftaba dhaqankayga dhegaysi
7. Waxaan kale oo aan Tixgeliyaa qofka hadalaya Dhaqdhaqaaqa, jidhka Xarakaadkiisa,firfircoonida Joogiisa, ilqabadkiisa. 8. Waxaan iska ilaaliyaa inay I mashquuliyaan dadku socsocdka, dhaqdhaqaaqa, aragga dibedda, iyo wixii kale ee iga qasa dhagaysiga 8. Waxaan iska ilaaliyaa jeedintadadka hadlaya ee ay adagtahay la socdka oo ku gaabinaya khudbada, fikradaha sida abaabul faqiirnimo, ama ku celcelinaya waxay leeyihiin
9. waxaan isticmaalaa war aan kalmado lahayn (il ka hadal,ilka cadayn, madax ruxid, iwm) marka aan doonayo in hadalka la iisii wado. 10. Dibaan u dheehdaa dibna waan u dhisaa odhaahaha dadka kale yidhaahdaan marka loo baahdo ee uu ama/ay ogaan doodnto inaanfahmay. 11. Waxa la leeyahay baan dhagaystaa halka aan ku mashquuli lahaa waxaa aan odhan doono. 12. Waxala leeyahay baan Dhagaystaa halka aan ku Mashquuli lahaa waxaan odhan doono Wadarta
Xaashi hawl qabad o ku saabsan hagaajinta shaqadayda dhegaysiga 1. Qayb ku saabsan shaqda dhegysiga o aan ka qiimeeyey mid hoosaysa markaan qalalbka samaynayey waa: _________________________________________________________ Shaqo gaar ah ama shaqooyin aan doonayo inaan qaato si aan u xoojiyo shaqdayda dhegyste ahaan halkan: _________________________________________________________ _________________________________________________________
2. Qayb kale ee shaqada dhageysiga oo aan ku qiimeeyey mid hoose qalbkan waa: _________________________________________________________ Shaqo gaar ah ama shaqooyin oo aan doonayo inaan qaato si aan u xoojiyo shaqadayda dhegeyste ahaan halkan: _________________________________________________________ _________________________________________________________
3. Qayb sadexaad ee shaqada dhegaysiga oo aan ku qiimeeyey hoosaysa qalabkan waa: _________________________________________________________ Xildhibaanka G/Degaanku markuu yahay Isgaadhsiiye
Shaqo gaar ah ama shaqooyin aan doonayo inaan qaato si aan u xoojiyo shaqadayda dhegayste halkan: _________________________________________________________ _________________________________________________________
4.5: Layli: La Hadalka Beesha Waqtiga loo baahanyahay: 60-75 daqiiqadood
Ujeeddo: Layligan waxaa loogu tala galay in laga qaato waayo aragnimada ka qayb galayaashu inay muujiyaan hal abuurka ay kula xidhayaan dadka magalda hooga marka lagu daro bixinta iyo qaadashada warka Habraac Sheeg in ujeeddada layligu ka qayb galayaasha, u shaqaynaya kooxo yaryar, in la dhaliyo taxane fikrado ah oo lagu heli karo war beesha iyo taxane oo kii hore la mid ah oo fikrado ah si looga helo warcelin gaga bulshada si dabeeto isugu geeyo ay ugu warbixyaan helitaanadooda. U qaybi ka qayb galayaasha kooxo yaryar oo Shan ama Todoba ah. Waxaad koox kasta oo yar usoo jeedin kartaa inay isticmaalaan arrin aad loo yaqaan oo ah xirfad fikradeed. Dhalin la yidhaahdo ( Maskax-garaac) si loo sameeyo taxane fikrado ah (eeg shuruucda maskax garaaca ee sanduuqa hoose ku yaal). Waxaad soo jeediaa in mika mi ah koox kasta uu yaha madaxa/xasuusqore. Sii koox kasta markkeda, maskaxgaraax: 1. Maxay yihiin arrimaha aynu isticmaali karon si aynu war uga helno beesha si qancin iyo fahamsiin ah? 2. Maxay yihiin arrimaha aybu isticmaali karon si aynu war uga heli lahayn beesha si aynu u ogaano waxa dadku innaga doonayo? Xildhibaanka G/Degaanku markuu yahay Isgaadhsiiye
SHURUUCDA MASKAX-GARAACA 1. Fikrad kasta waa la qorayaa sidaa loo yidhi. 2. Doodi ma jirto ama qiimayn lagu joojinayo sida caadiga ah ee fikraduhu u socdaan 3. Waxa u muhiin san waa triada fikradaha, maya tayada 4. Ka fikir fekredo wax ku dhisan firkrado hore ama kaba hor imanaya 5. Ha ka boodin fikradaha liita iyo kuwa lagu qoslo waxaa laga yaabaa inay ku jiraan waxyaabo qiime lihi 6. Jooji shan daqiiqo ka dib, sii koox yaroo kasta xidhmo oo waraaqo midab leh. Weydii xusuus qorka ay sameeyaan fikradahooda ay kaga jawaabayaan mid kasta oo suâ&#x20AC;&#x2122;aalahaa ka mid ah waraaqo kala duwan oo midab leh ka dib shirka maskax garaaca, kuna soo noqdo kooxda badan dabadeed 30-45 daqiiqadood.
Koox kasta sii labo xidhmo oo ah kaadhadh midabo leh. Weydii inay qoraan ra’ayiga ay ka qabaan jawaabaha ay siinayaan su’aal kasta ee ka kooban kaadhadh kala duwan oo midab leh maskax garaaca ka dib, una celi kooxda badan (30-45 daqiiqo) Marka ay kooxaha yar yari dhameeyaan hawlahooda, dib isugu yeedh waxaanad weydiisa madaxda kooxaha yaryar inay akhiriyaan fikradaha ka soo baxa qayb kasta. Ka ururi waraaqaha madaxda tiimamka kuna dheji gidaarka makhsinka tababarka. Dhiiri geli dood ku saabsan fikradaha kala duwan.
4.6: Layli: LA TASHIGA DOORTAYAASHA Waqtiga loo baahan yahay 120-150 daqiiqadood
Ujeeddo: Layligani wuxuu ka qaygalyaasha siinayaa waayo aragnimo inay go’aan ka gaadhaan arrinta iyo sida loola xidhiidhayo doortayaasha beesha mrka qadiyada xasaasi ah ee dadka laga hadlayo
Habraac: Qaybi waraaqaha furitaanka doodad beesha (ku muujisan hoos) weydiina ka qayb galayaasha inay akhriyaan u sheeg in ka qaybgalayaaashu ka shaqayn doonaan dhowr kooxood oo yaryar habraac lagu helayo war beesha kuna saabsan mashruux guriyadhis oo ah qadiyad muhim ah lagagana doonayo beesha inay go’aan ka geysato sidii la isalu meel dhigi lahaa qadiyada. Weydii in ka qaygalayaashu ku daraan jawaabohooda ku saabsan suaalaha soosocda marka ay diyaarinayaan naqshadahooda: 1. 2. 3. 4.
Sidaa baa baaxadda dhbaatada lagu helayaa? Waa kuwee doortayaasha xildhibaanadu la shirayaan? Sidaabaa ugu wanaagsan oo loo gaadhi karaa doorte kasta? Maxay xildhibaanadu u baahan yihiin inay doortayaashu u shegaan iyo waxa ay doonayaan in doortayaashu u sheegaan
U qaybi ka qayblgayasha aqoon is weydaarsiga dhowr kooxood oo yar yar mid kasta oo kooxaahaas ka mid ah waxaala weydiinayaa inuu sameeyo shaqada una fuliyo sida ay u qoran tahay inaanu saacad gudaheed ku dhiibo qorshaha ku haboon ee war isgaashsiin ah iyo latashi ku qoaran warside. Saacad dabadeed, isugu yeedh kooxahaas yar yar warbxin weydii. Dhamee layliga adoo ku samaynaya ka qaybgalayaasha inay ka doodaan fa’iidada iyo khasaraha qoarshayaashakala duwan ee la tashiga doortayaasha arimaha xasaasiga ah ee dadweynaha.
BEESHA OO DOOD LOO FURAYO Beel daris ah ayaa waxa ku dhuftay dhul gariir weyn. Khasaaraha naf iyo maal iyo hanti ayaa warkii qabsaday maalmihii u danbeeyey. Waxaa lagu soo qoray faallo wargeyska dalka gudihiisa kasoo baxa tafatiruhu aad buu u weeraray dawladda magaalada wax ay ku sheegay inay ahayd (diidmo naxariis darro ah oo aan miyirqab ku jirin diidmadaa in layli ku saabsan tayada guryo dhiska.) faalladu wuxuu saadaalinayaa dhibaato arrintaas la mid ah guda ahaan iyo meelo masuuliyada waxa dhacaa ay dusha ka saran tahay xildhibaan iyo baarlamaanka mgaalada, loona baahan yahay in la sheego faalo muujiyey fatah shcuur ah oo ka yimi muwaadiniinta oo doonaya in arrinkaas wax lagu qabto ka hor inta aan dhibaatadaas oo kale besha ku dhicin.
Mid xildhibaanada ka mid ah ayaa wuxuu yahay Enginer dhisme, wuxuu muddaba ku mashquulsana ainuu xildhibaanada wax ka qabtaan dhismayaasha magaalda ee si laga naxo u liita xeerkooda dhismaha guryihiisa cusub. Xildhibaanadu aad bay ugu bilo diidsanayeen inay arrintaa xeerka dhisme ee guryaha bedkan, qiimaha aad u badanaya, xildhibaanaduna waxay baqdin ka qabaan inay beeshu ku kacdo gaar ahaan golaha xildhibaanadu waxuu ka werwersan yahay kacdoonka ka imanaya dadka dhismayasha hadda jira leh iyagoo ka baqanaya in magaaladu kiciso heerka dhismaha iyo wanaajintooda iyadoo aan la eegin qaqiiqda jirta o ah in xaqlayashaasi ay yihiin kuwa ugu wen ee u waayaya haddii mar kale magaaladu la kulanto dhul gariir ama dhbaato kale oo dabiici ah. Waxay ka shakisan yiiin qaar xildhibaano ka mid ahi, laakiinse aan la ogayn xaqiiqdeeda, in qaar ka mid ah dadka leh guryaha liita qaarkood loo fasaxayo si sharci daro ah, inay ka ka dhistaan guryo dhaadheer seesas loogu tala galay dhismayaal qaadir kara dabaq keliya. Waxa golaha xildhibaanadu dareensan yihiin waxa dhici kara marka dadweynuhu arrintaas gaar ahaan marka lagu daro heerka dhisme ee sharciga oo herba maraysay meel qarax ah. Marka iska dhaafo khataraha siyaasadeed, waxay xildhibaanaddu aaminsanyihiin in lagu wadi karayn iska indho tirka runta. Arrintu si kastaba ha ahaatee, haddii xoogay lacag ah la doonayo in lagu kharash gareeyo sare u qaadidda tayada guryaha, waxa golaha xildhibaanaddu dareen san yhiin in arrintaasi suurtogal tahay oo keliya marka lahelo go’aanka beesha. Xildhibaanadu waxay dareensan yihiin inuu jiro war dheeraad ah oo sheegaya inta dhibaatadu le’egtahay iyo in la helo siyaabo loo abuuro wada hadal lala yeesho doortayaasha. Mid ka mid ah xildhabaanada waxa maskaxda saaxiibadeed ku jira, sidaynu ku helaynaa.
4.7: Layli: XIRFAD WAREEJIN Waqtiga loo baahan yahay: 30-45 daqiiqadood
Ujeeddo: Layliga waxa loogu talo galay inuu ku caawiyo ka qaybgalayaashu wareejiyaan waayo aragnimadooda ay ku barteen aqoon siweydarsiga hawlahooda dinida-runta ah iyaga oo ah madax la doortay. Wuxuu layligani shiishka saarayaa kicinta xaajooyinka, samaynta qorshe run ah, iyo go’aan shakhsi ah. Shayada badankeeda waxaa lagu qabanayaa si shakhsi ah oo ay ku jirto wada shaqayni.
Garashada Iyo Qabashada Waxa U Dhexeeya Gacan Bad Ah
Waxaa guud ahaan la isku raacsan yahay in ujeeddada tababarku yahay hagaajin sida dadku hawsha u qabtaan iyadoo la tusayo si ka wanaagsan. Run ahaantii guusha waayo aragnimada tababarka waxaa lagu qiyaasi karaa koritaanka shakhsiga ah iyo isbedel ka yimaadka wahktiga iyo ka dib mark tababarku dhamaado. Inyar ayuu tababarku leeyahay samaynta ka qaybgalayaasha aqoon isweydaarsiga sida ay tababarayaashu rajayn lahaayeen, gaar ahaan ka dib marka la soo ban dhigo dhowr saacadood ka dib. Farxadda markaa taagani markiiba way baabaysaa marka tababartaha ay soo waajahdo dhaqamadii shaqo ee gaboobay iyo diidmada shaqaynta kooxaha shaqada ee aan ka qayb galin waayo aragnimadii tababarka. Sida kale go’aano wax barasho iyo in la sameeyo mark uu xidhmaayo aqoon isweydaarsigu wuxuu ka caawin karaa ka qaybgalayaasha diidmada barahso ee ka or timaadda iyo jawiga shaqo. Tababaruhu wuxuu tababartaha u fududayn karaa si ay si sahlan ugu kala gudbi lahaayeen caalamka waxbarahsada iyo ka qabashada iyaga oo maraya wax yar oo layliyo qorshayn ah. Uga fikir sidan waqtiga lagu qaadanayo dhiirigelinta gudniinka waxbarahso waxay noqon kartaa kala duwanaanta u dhexaysa soo bandhigid gaaban iuo fikrado xiiso leh iyo waayo aragnimo noloosha bedelaysa.
Habraac: Sii ugu yaraan nuse-saac marka aqoon isweydaarsigu dhamaado sidaad diiradda u saartid dareenka ka qaybgalayaashu barshooyinka muhiimna ah kuna dhiirigali inay waaan tijaabada waxbarashadaas shaqooyinkooda gole ahaaneed, ku bilow adiga oo siinaya ka qaybgalayaasha ilaa hsan iyo toban daqiiqadoo siday si xoarnimo leh ugu gudbin lahaayeen barahsadooda, fududee su’aalaha. Marka kaqaybgalayaashu dhameeyaan su’aalaha weydii inay ka qaybgalaan si degdeg ah labi ilaa saddex arrimood oo ay ku tala jireen inay u sameeyaan si ka dowan sida ay u qabteen hawlahooda xildhibaannimo tabiye ahaan xidhitaanka aqoon is weydaarsiga.
WAXBARASHO GUDBIN SUâ&#x20AC;&#x2122;AALO Dhowr daqiiqadood sii dub u eegista dhaqada tebiyaha, fikradaha cusub ee aad kula aqoon isweydaarsiyaan iyo sida aad u dareensan tahay. Dabdeedna halka hoos ku muujisan, ku qoar hal weedh ama labo aad kaga sheekaynaysid wax xiiso badan oo aad ka soo baratay naftaada intii aqoon iswydaarsigy socday.
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Adiga oo ku salaynaya wixii aad ka soo baratay naftaada iyo suurtallada badan ee isbedelkaa soo badhigidda ee aqoon isweydaarsiga ku jiray waa maxay labda ama saddexda arromood ee aad ku talo jirto inaad si ka dowan u gaysid kaalintaada tebiye ahaan?
1. ______________________________________________________ 2. ______________________________________________________ 3. ______________________________________________________ Ugu danbayntii, waa maxay caqabdaha ama cimilada shaqo ee aad ku raho weyntahay inaad waajahdo inta aad ku mashquulsantahay hawlaha aad ku fulinsid sibedelladan? Maxaad samayn doontaa si aad u beebiisid ama u yaraysid caqabdahan?
Hawshii lagu baabiinayey caqabadaha
1. ______________________ 2. ______________________ 3. ______________________
Haddaad baran kartid, waad samayn kartaa 36
PRIORITY ONE WORDS ENGLISH 1. Accountability 2. Action plan 3.Active Listening
6.Assessment 7.Authority 8.Awareness 9.Basic Education 10.Benificiery Xildhibaanka G/Degaanku markuu yahay Isgaadhsiiye
11.Cabacity Building 12.Case Study 13.Chick list 14.Civic
16.Commitee 17.Communicator 37 18.Community 19.Community Development
SOMALI -Xisaabtan -Xilkaa Saaran yahay -Qorshe hawleed. -Wax-qabad hawleed -dhegaysi feejigan -Dhegaysi Darban -Dhegaysi Mug leh. -Kala Doorasho -Wax bedeli kara wax kale -Arji Codsi Adeegsi -Qiyaasid -Qiimayn -Suldada -Awood xukun - Wacyi-galin -Ka war qab -Wax-barasho Asaasi ah. -Dan ku Qabe -Ka faaâ&#x20AC;&#x2122;iidayste -Kobcin wax Qabad -Awood dhisid. -Daraasad Xaaladeed -Liis Hubineed -Madani -La xiriira magaalo -muwaadin -Gacan siin -Wada shaqayn -Is Caawimid -Guddi -Gaarsiiye -Isgaadhsiiye -Beel -Jaaliyad -Horumarin Beeleed -Horumarin Jaaliyadeed
20.Concepts 21.Conceptual Hat Rack 22.Conflict 23.Consensus 24.Consequently 25.Constituency 26.Co-operation 27.Council 28.Councilor 29.Counter productive 30.Criteria 31.Criteque 32.Decion Maker 33.Definition 34.Delegation/Delegate
37.Dialogue 38. Effective 39.Effective leadership 40.Effeciency 41.Elected Leadership 42.Empower/Empowerment
38 43.Enabler/Enable 44.Essay
-Figrado -Aragtiyo -Figrada Metalaada Xilaalka -Is-qabad/Khilaaf - Iska hor imaad -Rayi la isku raacay Aqbalaad figrad guud -Natiijo -Cawaaqib -Dagaan Doorasho -Iskaashi Wada shaqayn Gole Xil-dhibaan Degaan Xubin ka tirsan Gudiga degaanka -Maax Dumin -Lid ku ah. -Cabirka wax lagu saleeyo Qoddobbo wax lagu saleeyo. -Wax lagu Saleeyo -Goaâ&#x20AC;&#x2122;aamiye -Qeexid. -Wefti -Ergo -Demoqraadiyad -Tilmaan -Sifo -Sharax -Wada Hadal -Wax ku ool -Sidii la rabay wax u tarid. -Hogaaminta wax ku oolka ah. -Wax qabad fiican leh -Hogaaminta la doortay -Awood siin -Awood u fasaxid -Awood siin -Karti siin -Qormo -Maqaal
45.Ethical 46.Evaluation/Evaluate 47. Evaluation Survey 48.Exercise 49Facilitator 50.Feed back 51.Financier 52.Gender 53.Goal 54.Good Governanace 55.Government 56.Group Discusion 57.Guide 58.Hand Book 59.Human Resources 60.Human Settlement 61.Implementation 62.Information 63. Institution 64. Institution Builder 65.Institionalize 66.Instruction
68.Leadership Process 69.Learning
-Hab-dhaqan -Qiimayn -Qiimayn Sahan -Baaritaan qiimayneed -Layli Fududeeye/Sahle War Celin Jawaab Celin -Masuul Maaliyadeed. -Jandar -Hadaf -Gool -Hab Xukun Wanaagsan -Hab Maamul -Xukuumad -Dood kooxeed -Tilmaamid -Hage -Tilmaan Bixiye -Tilmaame Bare. -Khayraadka Dadka -Degsiimooyinka Aadanaha Degaamayn -Hirgalin -Fulin -Xog -Wargelin -Haya’ad -Haya’ad Dhise -Haya’deeye -Amar -Wax barasho -Wax barid -Qoddobbo Muhiim ah. Qoddobbo Ma Dhaafaan ah -Geedi socod Hoggaamineed -Barasho -Wax Barasho -Tacliin Barasho -Ujeeddooyinka Barashada Yoolka Barashada
-Aqlabiyad -Inta Badan -Geedi Socodka Maaraynta
73.Management Process 74.Meeting 75.Minority 76. Minutes 77. Mission 78. Monitoring 79. Negotaition/Negotiator
80. Networking 81.Organization 82. Over seer 83. Over view 84. Participants 85. Perception 86. Performance 87. Perspective 88. Policy 89.Policy Maker 90. Power Broker 91. presentation 92. Proactive 40 93.Process 94.Questionnairre 95.Quoum
-Kulan -Shir -Inta Yar -Laga tiro yar yahay -Hadal Qor -Hadal qoraal -Ergo -Risaalo -La socod -La saan qaad -Wada Xaajood siiye -Wada Hadal siiye -Gorgoriye -Shabakadeyn/Nidaam hawleed oo wada shaqaynaya -Urur -Korjooge -Dulmar/Guud Mar -Ka-qayb-galayaasha/Kaqaybqaatayaasha -Faham/Dhugmo/Garasho. -Waxqabad/Fulin Hawleed. -Ka eegid wajio kala duwan. -Qorshe Hawleed/Khidad/Siyaasad -Siyaasad Dejiye -Awood wax ku qabte/Awood adeegsade -Soo Bandhigid/Qadimaad -Ka hor dhaaf/Qorshe Curiye/Qorshe raac -Geedi socod/Socodka -Weydiimo Qoran/weydiimo taxane ah/weydiimo Sahan ah -Tirada ugu yar ee shirku ku ansixi karo
96.Rational 97.Reactive 98.Refrence 99.Reflection 100.Resources 101.Revenue 102.Role play 103.Session 104.Shared Vision 105.Simple Majority 106.Simulation 107.Slums 108.Solution 109.Stakeholders 110.Strategic Plan 111.Strategy 112.Summary 113. Symptons 114. Systamatic 115.Technique 116.Training Design. 117.Training Material. 118.Traing Need assessment.
-Maan-gal/Macquul -Falcelin/Qorshe laawe/Arrin ku baraarug -Tixraac/Raad raac -ilays noqod/Humaag noqod -Khayraad. -Dakhli -Door-jelid/Door ciyaarid -Fadhi/Kulan -Aragti wadaag -Aqlabiyad hal dheeri ah. -Iska yeelid/U ekeysiin -Buul caws/Carshaan/Isku raran -Furdaamin/Xal -Daneeyayaal. -Qorshe istaratijiyadeed. -Istaratijiyad/Tab/xeelad -Soo koobid/Khulaaso -Astaamo/ Calaamado -Habaysan/Nidaamsan -Farsamo/Xeelad. JaanjooyadaTababarka/Naqshadeynta Tababarka -Agabka Tababarka/Qalabka Tababarka -Qiyaasid baahida Tababarka/Qiimeynta Baahida Tababarka
119.Transparency. 120.Transparent 121.Unanimous 122.Vision. 123.Warm up exercise 124.Workshop. Priority two words. 125.Acknowledgment 126.Administrative Fixes.
-Wax qaris laaâ&#x20AC;&#x2122;aan -Qof aan waxba qarinaynin. -Loo dhan yahay/Gedigood. -Aragti fog/Aragti dheer -Iskulalayn/Qandhicin/Diiran -Aqoon Isweydaarsi.
127.Analysis 128.Assignment. 129.Assuption
-Gorfeyn/Falanqeyn/Taxliil. -Shaqo Mucayin ah -Maleyn/Si u qaadasho
130.Benchmark 131.Challenges 132.Collective 133.Conceptual frame work
-Bar qiyaaseed/Bartilmameed -Caqabad/Loolan/Hardan -Kooxeed/Urureed/Wadareed -Gadaan-fikradeed/Aasaas fik
134.Constructive 135.Conventional Wisdom
-Wax dhisid/Dhismo-gal -Xikmad soo jireen ah.
136.Corruption 137.Dilema 138.Diversity 139.Encouraging 140.Fundamental 141.Identification 142.Indivitual Contribution.
-Musuq-maasuq/Laaluush. -Laba daran mid dooro -Kala duwanaan/Kala gedisnaan -Dhiiri-galin/Geesinimo galin. -Asal/Aasaasi. -Tilmaamid/Baadi sooc/Aqoonsi. -Gacan ka geysi qofnimo/In qof biiri
143.Infrastructure 144.Input. 145.nsight. 146.Inspiration. 147.Interaction. 148.Judgement 149.Land Use Malaise. 150.Multipurpose 151.Output. 152.Potential Candidate 153.Pre-training. 154.Priority 155.Problem Solver 156.proficiency 157.Public 158.Public Sector. 159.Public Service 160.Regulation 161.Self Governance. 162.Self Introduction. 163.Self study. 164.Self Assesment 165.Shirinking Resources.
-Dhismo-hooseed. -Wax galin -Aragti Maskaxeed. -Maan-godlin/Ra’yi fiican helid. -Isdhex-gal/isla fal-gal/Isku dhafmid. -Xukun/Go’aan -Aafada dhul boobka/Dhul ku habsa -Ujeeddo badan/Ujeedooyin kala du -Wax ka soo saarid. -Musharax dihin/Musharax iman kara -Tababar horaad/Tababar hortiis. -Mudnaan. Furdaamiye/Xaliye dhib -Xirfad Hanasho/Aqoon sare u leh. -Guud -Qaybta Guud -Adeeg guud. -Xeer Hoosaad. -Isxukumid. -Is-sheegid/Is-tilmaamid. -Isbarid -Isqiyaasid/Isqiimeyn. -Khayraadka sii yaranaya
167Training needs. Priority three Words 168.Absolute Poverty 169.Absolute 170.ApplicationCommitments
-Biroqraadiyad/Xafiisyad Dawladda oo shaqadoodu gaabis tahay -Taxadar/Digniin. -Cufnaan/Jirmiga shega. -Hoos u dhac degaan/Hoos u dhac xaaladda degaanka -Dheeli-tir/Is-le’eg -Ha is wareerin/Dadka badeecada naadiya -Maldahnaan/Hadal aan dhab loo muujin laakiin laga fahmi karo wajiga qofka.
172.Caution 173.Density 174.Environmental Degradation 175.Equilibrium 176.Hawker 177.Implication
178.Jurisdiction. 179.Legal Requirment. 180.Legislation. 181.Legitimate 182.Matchmaker 183.Misinterpretation 184.Off-spring 185.Optimistic 186.Partnership 187.Pessimistic
188.Phenomina 189.Professional 190.Recycle 191.Rules. 192.Status Quo 193.Stimulation. 194.To Wear different Hats. 195.Waterpolution. 196.Facilitator
-Saboolnimo -Gebi-ahaan/Buuxda. -Nidar-gal/Daba-qaad ballan
-Haya’addaha Garsoorka. -Baahida Sharciyeed. -Xeer Degin. -Sharci ahaan/Qaanuun ahaan -Isku aadiye wax isku habboon -Fasiraad xumo/Fasiraad qaldan -Farac. -Samo-filasho/Samo arag/Dhanka Wanaagsan ka eeg -Wadaag/Wada lahaansho. -Xumo arag/Xuma filasho/Dhanka xun ka eeg -Ifafaalayaal. -Xirfadle/Xeel-dheeri -Sameyn celin/Dib u nacfi galin -Qawaaniin/Xeer -Xaalad taagan -Xiiso galin/Fi-fircooni galin. -Xilqaad badnaan/Kaalimokala duwan qaa -Dikhaw Biyood/Wasakhaw Biyood/Dhiiq -Fududeeye
197.Financier 198.Gender 199.Negotiator 200.Overseer 201.Policy Maker 202.Power Broker 203.Institution Builder 204.Leader 205.Leadership
-Masuul Maaliyadeed -Jandar -Wada hadal siiye. -Korjooge. -Siyaasad dejiye -Awood wax ku Qabte. -Hayaâ&#x20AC;&#x2122;ad dhise -Hogaamiye -Hogaamin
P.S. In Each English word or term, the most common and acceptable Somali language definition is the first one, which is bolded.
Xildhibaanka G/degaank a oo ah Isgaadhsiiye Tilmaame-bare 4